प्रेरक प्रसंग : के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ? — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ?
काठमाडौं – १९८९ मा अर्मेनियामा भयानक भूकम्प आयो । ८.२ रेक्टर स्केलले शक्तिशाली भूकम्पले अर्मेनियालाई बर्बाद गरिदियो र चार मिनेटभन्दा पनि कम समयमा ३०,००० मानिस मरे ।
शुरुमै ऊ हतास भएन, उसलाई आफ्नो छोराको याद आयो, उसले आफ्नो छोरासँग वाचा गरेको थियो, “चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति होस तर म तिमीलाई लिन आउनेछु ” यो कुरा याद गरेर उसको आँखामा आँसु आयो । जब उसले पहिला भवन भएको ठाउँमा हेर्यो तब त्यो ठाउँमा भवनको थुप्रो बनेको देख्यो र उसलाई कुनै आशा लागेन । निराशाजनक स्थिति देखिरहेको थियो, तर उसले आफ्नो छोरासँग जसरी पनि उसलाई लिन आउने वाचा गरेको थियो ।
ऊ हौसला राखेर काममा जुटिरह्यो, किनकि उसले आफ्नो आँखाले हेर्नु थियो “मेरो छोरो जिउँदो छ कि छैन ?”
उसले ८ घण्टासम्म खन्यो… १२ घण्टासम्म… २४ घण्टासम्म… ३६ घण्टासम्म… फेरि ३८ औं घण्टामा उसले एउटा ठूलो ढुंगा हटाएपछि आफ्नो छोराको आवाज सुन्यो । उसले कराएर आफ्नो छोराको नाम बोलायो, “आर्मेण्ड…. !”